ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သရုပ်ပျက်လို့ ပြောသင့်ရဲ့လား”
ခွိ.. ခွိ.. ခွိ..
CCTV 1001 said...
|> မိမိ မိရိုးဖလာ လက်ခံကျင့်သုံးလာသော ဓလေ့ထုံးတမ်းတို့နှင့် မကိုက်ညီသော၊ ခွဲထွက်သော အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူတို့နှင့် သစ်ဆန်းသော အရာမှန်သမျှကို အလွယ်တကူ လက်မခံရုံမက ပြစ်တင်ရှုံ့ချတတ်သော သဘောရှိသည်။ မိရိုးဖလာ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ကျင့်ကြံခြင်းကို မြင့်မြတ်သည်၊ ယဉ်ကျေးသည်၊ ကောင်းမွန်သည်ဟု အထင်ရှိတတ်ကြသည်။ <|
လွယ်ပါတယ်.... ခင်ဗျားတို့ လင်မယား နှစ်ယောက် အိပ်ယာ ပေါ် တစ်ခြားအမျိုးသားတစ်ဦး လာအိပ်ရင်ကော...
( Threesome Culture လေးနဲ့ ကိုပေါ Alright .alright နဲ့ "က"နေမလား)
Do you want to accept homosexuality? this is also new . Right?
Hi Anonymous (June 11, 2009 3:21 PM )
Homosexuals are also human beings. You should not discriminate them. There is morally nothing wrong with one’s sexual orientation. They need the community’s support and understanding, not discrimination. Please be open-minded, seriously.
မိတ်ဆွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက်ဆိုရင် သူတပါးရဲ့ ဘ၀အခြေအနေနဲ့ လူတယောက်ရဲ့ Sexual orientationကို ပြက်ရယ်မပြုသင့်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်တောင်မှ နောင်ဘ၀မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် လီကွမ်းယူတို့တောင်မှ ဒီ homosexuals တွေအပေါ် ထားခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ဥပဒေတွေဟာ မှားမှန်းသိလို့ ၀န်ခံပြီး တစထက်တစ တိုးချဲ့ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ဒီကွန်မင့်ကဏ္ဍမှာ အဲသည်ကိစ္စအပေါ် discriminate လုပ်တဲ့ ကွန်မင့်တွေပါလာခဲ့ရင် အဖျက်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
CCTV 1001.....Threesome က ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဗျာ။
မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း တချိန်တုန်းက သရီးဆမ်း မက နေခဲ့တဲ့ ဘုရင်တွေကို ဘုရားထူးခဲ့တဲ့ ခေတ်ရှိခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ နိုင်ငံခြားသားဆိုတိုင်းလည်း သရီးဆမ်းနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့သာ တချိန်လုံး ထစ်ကနဲဆို အဲသည်ကိစ္စတွေပဲ တွေးနေကြံနေကြလို့ အဲသည်လို ထင်နေတာပါ။
အဲသည်ကိစ္စကို ကျနော့်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လက်မခံပေမယ့် တခြားသူတွေ သူတို့ဘာသာ အချင်းချင်း ကျေနပ်ကြလို့ ကန်လန့်ကာ နောက်ကွယ်မှာ ကျင့်သုံးနေကြရင် ခင်ဗျားရော ဘာတတ်နိုင်မှာမို့လဲ။ မြန်မာလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကျိတ်ပြီး ဖြစ်ပျက်နေလဲ ဘယ်သူသိနိုင်တာမှတ်လို့။
why so sensitive? i just ask u do u accept? i haven't said anything? be realx. haha. what wrong with being gay. r u?
Its onlyafew moment that i write some comments in your blog, now may irequest you??????? If some comments is not suitable for your subjet, please delete them.
We do all our best for our population. Still now i'm proud of me to be haveaburmese, and i do what i can for our native land.
i realy wait your part2of "pyaw pyan "..........
Sorry, i can't type in burmese language.
Hi Anonymous (June 11, 2009 5:13 PM),
Yes. I am sensitive particularly on human-right issues. If you have no intention to discriminate against the homosexuals you should not ask this question in the first place. I admit that I too discriminated them before I understand about the issue.
I am notagay. But I have colleagues, teachers, relatives, friends, activists who are gays. Should I discriminate them for their sexual orientation?
A lot of young boys who realize they are different from other boys in the class, the self-realization came to them asashock. They dare not speak out about their sexuality because they know even their family members will reject them, not to mention the conservative community.
Some of them can’t resist the miseries and discrimination imposed on them, they commit suicide.
If you want to know more about them, please go and read at www.yawningbread.org .
Then, you will understand why I am so sensitive on this issue.
မခင်ဇင်မင်း…. အကြံပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပိုင်း(၂)ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြားထဲမှာ နောက်ထပ် တပို့စ်လောက် ရေးချင်သေးလို့ပါ။ စနေတနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်မှာတော့ တင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မဆိုင်တဲ့ ကွန်မင့်တွေကို ဖျက်ပိုင်ခွင့်ကို ကျနော်အခုအထိ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲပါ။ လိုအပ်လာပြီလို့ ကျနော်ယူဆတဲ့ တချိန်မှာ ဖျက်မှာပါ။
အခုမဖျက်သေးဘူးဆိုတာ ကျနော့်မှာ ရည်ရွယ်ချက်တခုရှိလို့ပါ။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကို အခုဖွင့်ပြောပြလို့လည်း ရပါတယ်။
ကျနော့်ကို နှစ်သက်သူ.. မနှစ်သက်သူ၊ အမြင်တူသူ.. မတူသူ၊ ဆဲဆိုသူ… အားလုံးကို ကျနော် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ပေးချင်တယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက လူငယ်က လူကြီးကို ပြန်ပြောကျင့်မရှိ၊ ဆရာကို ကျောင်းသားက ပြန်ပြောကျင့်မရှိ၊ အုပ်ချုပ်သူကို ပြည်သူလူထုက ပြန်ပြောခွင့်မရှိ... အဲသည်လို ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျနော်တို့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတယ်။
အခု အင်တာနက်ပေါ်မှာ…. အနည်းဆုံး ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာတော့ ရန်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို ကျနော်ပေးချင်တယ်။ တခြား မဆိုင်သူတွေကို မထိခိုက်တဲ့ ကွန်မင့်တွေဖြစ်နေသရွေ့…. ကျနော့်ကို ဆဲတာ ဖြစ်နေပါစေ… ကျနော် တမင်လွှတ်ပေးတာပါ။ ဆဲတယ်ဆိုတာကလည်း တနည်းပြောရရင် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းကုန်ခန်းသွားလို့ပါ။ ဒီလို ဆဲနေတဲ့လူတွေမှာလည်း သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဆဲချင်စိတ်ကုန်ခန်းသွားမယ့်အချိန်၊ မှန်မှန်ကန်ကန် တွေးခေါ်တတ်လာမယ့်အချိန်၊ မတရားသဖြင့် လုပ်ရမှာကို ရှက်တတ်လာမယ့် အချိန်အခါ ရှိမယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော့်ကို အမနာပ ဘယ်လိုပင်ရေးပါစေ ကျနော် လွှတ်ပေးထားပါတယ်။
အဲသည်ကွန်မင့်တွေကြောင့် စာဖတ်သူစိတ်ထဲမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်ကပဲ ကြားက တောင်းပန်ပါတယ်။
i just wanna know whether u accept or not. because u also grew up with conservative surrounding even though u said u r open minded. i do really understand that they have rights. But homo is still controversial thing even in united states. in fact, spore leaders do not accept,but it is inevitable.As u know, nowadays this is one of popular things.
ကျနော်ကတော့ “သရုပ်ပျက်လို့ ပြောသင့်ရဲ့လား” ရဲ့ အယူအဆကို လက်ခံ ပါတယ်။ အမြင်ကျယ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွင်း မှာလဲ gay တွေ threesome တွေ ရှိနေတာဘဲလေ။
ဒါတွေကို လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပြဿနာ မဖြစ်အောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ဥပဒေ တစ်ခုပြုပြီး သတ်မှတ်ပေးဖို့ဘဲလိုတာပါ။ ကိုယ်နဲ့ အကြိုက် မတူတဲ့ သူတွေနဲ့ ဘယ်လို တည့်အောင် ကိုယ့်ကိုမထိခိုက်အောင် ပြဿနာ မဖြစ်အောင် နေထိုင်ရမယ် ဆိုတာဘဲ သိဖို့လိုတာပါ။ လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်မကြိုက်တာတွေကတော့ ရှိနေတာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ မတရားတာတွေ ရှိနေတာကိုတော့လက်ခံလို့ မရသေးဘူး။
.............now may irequest you??????? If some comments is not suitable for your subjet, please delete them......
Do U only need " Kyi-ko-Boat-Myaut, Boat-ko-Kyi-Myaut " comments.?
Coz he want more commments..
that's why open..
PUBLISH YOUR COMMENTPREVIEW....
he like to be famous in whatever...
ကိုပေါရေ… ခုလို ယေဘူယျကျကျရှင်းသွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်… ကျွန်မအမြင်ပြောရရင် ဘောင်းဘီဝတ်တိုင်း၊ စကတ်ဝတ်တိုင်း သရုပ်ပျက်လို့မခေါ်နိုင်ပေမယ့်် ၀တ်ဆင်သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အတော်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်… အိုက်လို့ ဘောင်းဘီတိုဝတ်ပြီးထွက်သွားတဲ့ မိန်းခလေးနဲ့လူကြည့်ခံချင်လို့ဘောင်းဘီတိုဝတ်ပြီး ထွက်သွားတဲ့ မိန်းခလေး နှစ်ယောက်ကွဲပြားသလိုပေါ့… ထိုနည်းတူ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် နှစ်ခြိုက်လို့ က အဓိက မဟုတ်ပဲ သူများက သိပ်ယဉ်ကျေးတာပဲ၊ သိပ်သိမ်မွေ့ တာပဲ လို့အပြောခံချင်လို့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေး ၀တ်ပြပြီး မျက်လုံးက ကျီးကန်းတောက်မှောက်ဆိုလဲ အလကားပါပဲ… ခေတ်ကာလ အခြေအနေအရ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို လိုက်ပြီး ၀တ်စားဆင်ယင်တာ သဘာဝတရားပေမယ့် အထိန်းအကွပ် တခုတော့ ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်…ခေတ်မှီတာ အပြစ်မဟုတ်ပေမယ့် အထိန်းအကွပ်တွေ မဲ့လာတော့ ဟိုတလောက ကိုညီလင်းဆက် ဘလော့ဂ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သင်္ကြန်တွင်းက အဖြစ်လို အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်တဲ့ အရှက်အကြောက်ကင်းတဲ့ အပြုအမူတွေ လူ့ ရှေ့ သူ့ ရှေ့ မှာ လုပ်ဖို့ ဝန်မလေးတော့ပါဘူး… ၀တ်စားဆင်ယင်မှုထက် ကိုယ်ကျင့်တရားက အရေးကြီးတာ မှန်ပေမယ့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုလျှပ်ပေါ်လော်လီမှုက နဂိုက ကောင်းနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်ပြားစေဖို့စေ့ဆော်စေတဲ့ အချက်တချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အပြင်မှာ တကယ့်လက်တွေ့ ဘ၀တွေထဲ ဥပမာ အများကြီးတွေ့ နိုင်ပါတယ်… အထူးသဖြင့် မိန်းခလေးတွေ အတွက် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့်ပဲ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်…ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို လက်ခံသင့်ရင်လက်ခံရမှာ ဖြစ်သလို မိရိုးဖလာ ထုံးတမ်းစဉ်လာက ပြင်ဆင်ဖို့မလိုအောင် လက်ခံသင့်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲ ခေတ်တွေ ပြောင်းပြောင်း ပြင်စရာကို မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်…
ယဉ်ကျေးမှု ဆိုလို့ ကျွန်တော် ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးတာလေး နည်းနည်းပြောပါရစေ။
မြန်မာလိုကသာ ယဉ်ကျေးမှု ။
အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ ၂ မျိုးဖြစ်နေတယ်။
Culture တဲ့ ၊ Civilization တဲ့။
ကျွန်တော်မှတ်ဖူးတာက ဒီလိုပါ ..
Culture -> လက်ခံထားတဲ့ ယုံကြည်မှု ဓလေ့ထုံးစံ။
ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတာထက် စရိုက် လို့ ဘာသာပြန်ခြင်းက ပိုပြီး နီးစပ်သင့်တော်မယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
Civilization က Culture (စရိုက်) တွေရောနှောနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း တဲ့ ...
Culture ကို (စရိုက်) ဓလေ့ထုံးစံ ...
ယဉ်ကျေးမှု ဆိုရင်တော့ Civilization လို့
မြင်လိုက် သုံးလိုက်တာက ပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်တယ်နော် ..
ကိုပေါရဲ့ ဘလော့ဂ် ပရိတ်သတ်တစ်ဦး
မရိုင်းချင်လို့..(Culture) လို့ရေးတာ. ဖတ်တဲ့ သူ အားလုံးနားလည်ကြပြီးသား...
မြင်သာတဲ့ အရာတစ်ခု ချပြလိုက်တာ.
ကြိုက်သလို ထင်...ဖတ်သူ တွေစစ်ထုတ်သွားပါလိမ့်မယ်.
ဆန်းသစ်တဲ့ အပြုအမူ ကြိုဆိုတယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ တခြားလူ လာ Share မယ်ဗျာ. ခင်ဗျား ကုတင်ဘေးမှာ ဝါးဆစ်လေး တီးပြီး Alright Alright နဲ့ လွယ်လင့်တကူကြိုဆိုနိုင် ရမှာပေါ့..ရှင်းပါတယ်
|>အဲသည်ကိစ္စကို ကျနော့်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လက်မခံပေမယ့် တခြားသူတွေ သူတို့ဘာသာ အချင်းချင်း ကျေနပ်ကြလို့ ကန်လန့်ကာ နောက်ကွယ်မှာ ကျင့်သုံးနေကြရင် ခင်ဗျားရော ဘာတတ်နိုင်မှာမို့လဲ။
June 11, 2009 3:48 PM <|
ကိုယ်ကိုတိုင် လက်မခံဘဲ များဘာလို့ ရေးနေလဲဗျာ.
ကိုယ့်စကား ကိုယ်တာဝန်ယူရဲ ရမှာပေါ့
|>အသစ်အဆန်းကို မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားကာ လွယ်လင့်တကူ လက်ခံတတ်ကြသလောက် ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်ကာ အထီးကျန်ဆန်နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အသစ်အဆန်းကို လက်ခံရန် တွန့်ဆုတ်တတ်ကြသည်။ <|
အသစ်အဆန်းကို လက်ခံတဲ့ ကိုပေါ မတွန့်ဆုတ်နဲ့လေဗျာ...
ဘုရင်ခေတ်က အကြောင်းတော့ ဘုရားထူးခဲ့ဖူးတဲ့ “သာဂီဝင်” (ကိုပေါ) အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တော့ မမှီလိုက်ဘူး........။
အပေါ်ကလင့်ခ်ကနေ ယူလာတဲ့ပို့ စ်လေးပါ ကိုပေါရေ။
Anonymous(11:10pm).... အခုလို ဗဟုသုတ မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဒီလို အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းကွဲပြားပေမယ့် မြန်မာဘာသာမှာ အသုံးအနှုန်းရောထွေးနေတဲ့ စကားလုံးများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "သံတူကြောင်းကွဲ" ( http://kopaw07.blogspot.com/2009/01/blog-post_11.html) ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကလေး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲသည်တုန်းကတော့ Civilization ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ကျနော် မစဉ်းစားမိခဲ့ပါဘူး။
မယုဝရီ.... အဲသည် တန်ဘိုးရှိတဲ့ လင့်ခ်ကလေးကို မျှဝေတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဓမ္မကျင့်မှု (မုဒိမ်းမှု)တခု ဖြစ်မြောက်တယ်ဆိုရင် သားကောင်(victim)ဖြစ်ခဲ့သူ မိန်းကလေးကို မလုံမခြုံဝတ်လို့ပဲဆိုပြီး အပြစ်တင်တာထက် တကယ်အပြစ်တင်ထိုက်သူက အလိုမတူဘဲ အဓမ္မမှု ကျူးလွန်သူကိုပါ။ အဲသည်မိန်းကလေးကို မြင်တွေ့ရသူ ယောက်ျားအများအပြားအနက်ကမှ ဘာကြောင့် သည်ယောက်ျားတယောက်ကထူးကဲပြီး အဓမ္မ ပြုကျင့်ရသလဲ။
မယုဝရီ ညွှန်းထားတဲ့ပို့စ်မှာ ဆူးညောင့်ခလုတ်တွေ ပေါများတဲ့ ယာကွင်းပြင်ကို ဆင်းမယ့် လယ်သမားဥပမာကို အင်မတန် နှစ်သက်မိပါတယ်။
နောက်တခုက ကျနော်ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ “ညောင်စောင်းရွှေသလွန်ထက်က ဆင်းသက်လာလေပြီ” (http://kopaw07.blogspot.com/2009/01/blog-post_7867.html)ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ မိန်းမတွေ အ၀တ်အစားကို လုံလုံခြုံခြုံဝတ်တဲ့ တိုင်းပြည်က ယောက်ျားတွေအနေနဲ့ မလုံမခြုံဝတ်တဲ့ တိုင်းပြည်က ယောက်ျားတွေထက် ကာမဆန္ဒနိုးကြွလွယ်တတ်တာကို ကျနော့်အနေနဲ့ ဥပမာပေးထားပါရဲ့။
ဆိုလိုတာကတော့ ဘဲလေးအက ကို ကြည့်ရတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ကို ကြည့်ရတဲ့အခါ အနောက်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ ရိုးဟိုးဟိုး....နေပြီဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အာရှသားတွေ (အထူးသဖြင့် မြန်မာယောက်ျားတွေ) အနေနဲ့တော့ အနည်းဆုံး ရင်ခုန်သံမြန်ချင်မြန်နေနိုင်ပါတယ်။
To: CCTV 1001
I think what Ko Paw have discussed is about "tolerance", NOT about personal "taste" nor "practice".
Ko Paw said he does not personally like nor practise threesome, but he tolerates (ie does not denounce) if other people do it. You should not confuse these two things.
But, of course there are some "extreme" behaviors thatamajority of people will not tolerate (for example walking naked in public).
Then, another question comes in. What is defined to be extreme is what is not? Well, it depends on the society and the time you are living in. In another 100 years, walking naked in public may probably become an acceptable behavior. Who knows? :-)
မိန်းမတွေကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ပေါ်တင်ကြီး
ကြည့်တဲ့သူဆိုလို့ စလုံး ယောက်ကျားလေးက ရှားရှားရယ်။
အများစုက ဗမာနဲ့ ကုလားဘဲ အဲလို အကျင့်ရိုင်းတာ။
Do I look like confused about that?.Noway every1 can c obviously what I meant.(especially with Bold lett;)
In another 100 years, walking naked in public may probably become an acceptable behavior. Who knows? :-)
It might be, coz of "Global warming" :-)
အဖေနဲ့ သမီးညားတာတွေ အမေနဲ့သား ညားတာတွေကရော....
မောင်နှမတွေ အခြင်းခြင်းရော လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဆို နိုင်မလားဟင်... ကျနော့ညီမနဲ့ ကျနော် တိတ်တိတ်ပုန်း... ညားနေလို့ပါ.... ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုပါ ရနိုင်ဘို့ ကျနော်တို့ ကိုယ်စား တောင်းဆိုပေးကြပါလား..ဗျာ....
ညီမလေးက ဒီလဆို ထိန်နေပါပြီ.....
June 12, 2009 1:48 AM...
သေချာတာကတော့ ခင်ဗျား ရုပ်တော်တော် ဆိုးလွန်းလို့ ဖြစ်မယ်...ငထုံ တို့က ထုံသာထုံတာ “မ”အ သေးဘူးးး
ကျနော်တို့လို တိတ်တိတ်ပုန်း လူမပြောရဲတဲ့ ဇတ်လမ်းတွေ ကို ပေါ်တင် လူကြားထဲ ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွား နေချင်လို့ တရားဥပဒေ ထုပ်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ကဲခွင့် တို့ public sex တို့ လုပ်ချင်သလောက်လုပ်နိုင်အောင် တလက်စထဲ ကြိုးစားပေးပါလား ဗျာ....
June 12, 2009 2:56 AM
ဟိုက်...ဒီကောင်က အင်း.. ဟို Threesome ထက် ပို“ဆန်း”နေတယ်..
ထိန်တာအကြောင်းရှိတယ် ခဏနေ မီးပျက်တော့မှာမို့..စိတ်မပူပါနဲ့လေ
I agree with Ko paw on this issue and like Ko Aung's comment. Our lord Buddha said that nothing is permanent. It's no exception for our culture and civilization which evolve with the time. When it comes to the Burmese traditional outfits , the people's opinions are gradually changed due to the globalization. More and more Burmese people have an access to the outside world since we are living in an information age.Besides, quiteanumber of Burmese people are living abroad for whatever reasons we have. So, the important thing is, we have to adapt to the culture of the country that we live in if we do not want to feel misfit .As we all know, the norms are set by the people in the society. If majority of the people in your society do not raise their eyebrows on what you are doing or what you are wearing , you are ok. But after all it will be up to the personality of the individual , who wants to stick with tipical Burmese outfits or international attires. It's head and tail perspectives, and non zero sum game.
Ko Paw.....after reading your posts on various issues, I truely believe that you have enough courage to touch the very sensative topics even though you know that make you look bad. You are so true to yourself. Despite my disagreement on some of the issues that you have raised, you are well entitled to your opinions.
ကျွန်တော်ကတော့ ယဉ်ကျေးမှု့ဆိုတာ ကာလ ဒေသနဲ့ ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာတော့ ပြောရခက်မယ်ထင်တာပဲ။ ဘောလုံးပွဲ စည်းကမ်းတွေလိုပေါ့။ ဘက်စကတ်ဘော မှာကျတော့ ဘောလုံးပွဲစည်းကမ်းတွေက ဘယ်မှန်မလဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ဘောလုံးပွဲမှာ ၀င်ကစားမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီစည်းကမ်းတွေိကို လိုက်နာမှ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ မကစားဖူးဆိုရင် တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ဘောလုံးပွဲစည်းကမ်းတွေက လူညီရင် ပြောင်းလို့ရသလို ဓလေ့ထုံးစံတွေကလည်း အဲလိုပဲ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Universal truth တွေမှ မဟုတ်တာ။
WARNING: This comment may contain some offending contents. Please do not read if you areavery conservative person.
>> ဆိုလိုတာကတော့ ဘဲလေးအက ကို >> ကြည့်ရတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကူး >> ၀တ်စုံနဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ကို
>>မြန်မာယောက်ျားတွေ) အနေနဲ့တော့ >> အနည်းဆုံး
I totally agree with you. Let me share my personal experience. When young, I was in Myanmar. At that time, access to erotic materials was quite restricted. So, even if I sawapicture ofagirl in bikini, I became so excited. (Frankly speaking, I even suffered fromacertain change in my body. No need to eleborate in details. Every guys knows. :-)
But, after I have some exposure to the erotic materials (thanks to the internet), seeingagirl in bikini (either in picture or in person) becomes nothing to me. I feel like "pyin-taung-pyin-thay-de". :-)
ယနေ့ လူတိုင်းနီးပါး လက်ခံနေကြပြီဖြစ်တဲ့ အနောက်တိုင်းက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အမျိုးသားအမျိုးသမီး စုံတွဲ ရင်ချင်းအပ်ပြီး ကကြရတဲ့ Ballroom dancing လို အကမျိုးကိုတောင် အရင်ခေတ်က မြန်မာမျက်စိနဲ့ ရှက်တတ်ကြရုံမက “ပွတ်သဘင်” ပွဲရယ်လို့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ကင်ပွန်းတပ်တာကို ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်မဟုတ်လား။
ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုအလျောက် ဒါမျိုးကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်မှ လုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူများ ယဉ်ကျေးမှုကို “ရိုင်းလိုက်တာဟယ်” လို့ အပြစ်တင် ရှုတ်ချပြောတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
လူထုဒေါ်အမာကို လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ပြည်သူလူထုဖက်က ရပ်တည်မှုတွေနဲ့ သူမရဲ့ စာပေတွေအရ ကြည်ညိုလေးစားပေမယ့် တချို့သော အမေ့ရှေးစကားတွေမှာတော့ ကျနော် အမြင်ချင်း မတိုက်ဆိုင်ပါဘူး။
ကာလ၊ ဒေသ နဲ့ ဆိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ ကျနော့်က ဘောလုံးပွဲအကြောင်းတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးစည်းကမ်းမှာတောင် အချိန်နဲ့အမျှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
အားကစား၊ ဥပဒေ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေမှာ သူ့နေရာအလိုက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ထားသင့်ပေမယ့် လူတွေရဲ့ အကြိုက်တရားနဲ့ စပ်ဆိုင်လာတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ သူတပါးကို မထိခိုက်သရွေ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတို့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတို့ဆိုတာလည်း လူတွေရဲ့ အကြိုက်တရားနဲ့ ရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြောင်းလဲကြတာမျိုးဆိုတော့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ တင်းကြပ်လိုက်ရင် တိုးတက်မှုနှုန်းထား နှေးကွေးသွားနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးကတော့ Universal truth တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မဟုတ်တာချင်းအတူတူမှာ တခုက တခုထက် သာလွန်မွန်မြတ်တယ်လို့ ယူဆနေမယ့်အစား မတူကွဲပြားတဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပိုမိုပဋိပက္ခနည်းသွားမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
တန်ခူးရေ…. လူကြည့်ခံချင်တာ မိန်းကလေး သဘာဝပါ။ (အဲ….ယောက်ျားလေးတွေလည်း အကြည့်ခံချင်ကြတာပါပဲ။း-)
သူ့ခေတ်သူ့ခါ အလျောက်ပေါ့လေ။ အရင်ခေတ်တုန်းကလည်း အလေးမဆံထုံးတို့ဘာတို့ ဆံထုံးအမြင့်ကြီးတွေ ထုံးပြီး လူကြည့်ခံရအောင် အဆန်းထွင်တာ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲသည်လို လုပ်တိုင်း လူကြည့်ခံချင်တယ် ပြောလို့ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲသည် အဆင်အပြင်ကို နှစ်သက်လို့ လုပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အခုခေတ် ယောက်ျားလေးတွေ နားမှာ ဖောက်ပြီး နားသံသီးဆွဲသလိုပေါ့။ နည်းနည်း အသက်ကြီးတဲ့ မျိုးဆက်ရဲ့ အမြင်မှာတော့ ထော်လော်ကန့်လန့်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပြောကြကြေးဆိုရင် ဟိုခေတ်က ရှေးမြန်မာတွေလည်း နားတောင်းတွေနဲ့၊ ယောင်ထုံး ထုံးရတာနဲ့။ ခေတ်ဟာ တပတ်ပြန်လည်လာတယ် ဆိုရမှာပေါ့။
သင်္ကြန်ရေကူးကန်ထဲကကိစ္စကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်လို့ ထင်မိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး တခုခုရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဆိုရင် ရင်ဖုံးအင်္ကျီအမြဲဝတ်ဆင်တဲ့ မိန်းကလေးတောင် အခုလိုမျိုး မှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကို လူငယ်တွေကြား ပျံ့နှံ့အောင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ လက်သည် တရားခံကိုပဲ အပြစ်တင်ရမှာပါ။
ဟိုသူကောင်းသားတော့ ငြိမ်ကျသွားပါလား.... ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ပါတကား....
နာမည် ထည့်ပြော ငပေါ လိုဘဲ ပတ်ရမ်းမနေနဲ့.
အချိန်ရရင် Homosexuals နဲ့ဆိုင်တဲ့တပို့စ်လောက်တင်ပေးပါလား။ ကိုပေါရဲ့ အတွေးကိုဖတ်ချင်လို့ပါ။
မနေ့ညက အိမ်ပြန်ရောက်တာကလည်း နောက်ကျနေတာနဲ့ တိုတိုပဲ ရေးခဲ့တယ်။
ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးတဲ့ Culture နဲ့ Civilization သဘောပါ။
အခု ထပ်ကြည့်လိုက်တော့ ကော်မန့် တွေ တော်တော်တောင်များနေဘီ။
အားရစရာဗျာ။ ကိုပေါကို အကြံတခု ပေးပါရစေ။
ကော်မန့်မှာ ပြောကြတာ တချို့က ကိုပေါပို့စ်ရဲ့ အာဘော်နဲ့ မဆိုင်သော်လည်း (လွဲနေသော်လည်း) သီးသန့်ပြောဆိုမယ့် အကြောင်းအရာတွေ ပါပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် အဲဒါလေးတွေ မှတ်ထားပြီး နောင်တချိန်မှာ ပို့စ်တင်ရင် ကောင်းမလားလို့ပါ။
စကားပြောသလိုပဲ ပြောနေရင်းနဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ပျံ့နှံ့ ရောထွေးကုန်တတ်တယ်လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုပေါရဲ့ပို့စ် အာဘော်ကိုပဲ အဓိကထားပြီး ကိုပေါနဲ့ သဘောတူကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
ကိုပေါပြောတဲ့ ကာတွန်း ဥပမာလေးက MultiCulture လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ပို့စ်ရဲ့ အာဘော်ကလည်း အဲဒီသဘောပါပဲ။
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးတဲ့ MultiCulture အကြောင်းကို ထပ်ပြီး မျှဝေပါရစေဗျာ။
ကိုပေါရေ ... မတူညီတဲ့ Culture တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတူ တည်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ အချက် ၂ ခုရှိပါတယ်တဲ့။
၁) Culture တွေဟာ တခုနဲ့တခု သဟဇာတ ဖြစ်ရပါမယ်တဲ့။ အင်္ဂလိပ်လို Acclimatization လို့ သုံးပါတယ်။
၂) Culture အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အရသာခံနိုင်ရမယ်တဲ့။
ထပ်ပြောထားတာက ဇာတိပုည အစွဲအလန်းတွေကို ခွာကြည့်နိုင်လေလေ Culture အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အားကျစရာ ၊ ခံတွင်းတွေ့စရာတွေ ရှိလာနိုင်ပါသတဲ့ဗျာ။
ဒါဆိုရင် ကိုပေါမေးထားတဲ့ “သရုပ်ပျက်လို့ ပြောသင့်ရဲ့လား" ရဲ့ အဖြေကို ရပါမယ်။
တဆင့်တက်လိုက်ရင် Culture အချင်းချင်း ပြိုက်ဘက် အဖြစ်ထက် အပြန်အလှန် အတုယူစရာ သဘောထားလာ နိုင်ပါသတဲ့။
ဆိုတော့ အနှစ်ချုပ်ကဘာလဲ ...
Deal လုပ်ရပါမယ်တဲ့ဗျာ။ ဘာအတွက်လဲ။
ကျောခိုင်းဖို့ မဟုတ်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြဖို့တဲ့
ရန်စောင်ဖို့ မဟုတ်။ ထိတွေ့ကြဖို့ လို့ ဆိုပါတယ်
တောင့်ခံကြဖို့ မဟုတ်။ ဖလှယ်ကြဖို့ တဲ့လေ ..
ကိုပေါရဲ့ ဘလော့ဂ် ပရိတ်သတ်တဦး
ငါ့ Comment ဘယ်ရောက်သွား တာလဲကွ.
Anonymous(June 12, 2009 2:02 PM )….. ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လ၊ ၃ လ လောက်က ဂေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်လောက် ဘာသာပြန်ဖို့ စိတ်ကူးမိခဲ့ပါသေးတယ်။ စိတ်ကူးဖြစ်ပုံက ကျနော့်မိတ်ဆွေ တန်ခူးရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ရေးထားတဲ့ “ကြီးကြီး” အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်၊ ဆက်စပ်ပြီးတော့ပါ။ မူရင်းကတော့ Yawningbread က အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးကနေ ထုတ်နှုတ်ဘာသာပြန်ဖို့ပါ။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဂေးတွေကို နေရာမပေးတာ၊ စာနာထောက်ထားမှုမရှိတာ၊ နားလည်မှုမရှိတာတွေကို ပပျောက်စေချင်လို့ပါ။
အဲသည်အတွက် ပို့စ်တခုလောက် တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။
တန်ဘိုးရှိတဲ့ကွန်မင့်တွေပါဖတ်ရလို့ပါ။ (စစ်အာဏာရူးလက်စွဲတော်များရဲ့ကွန်မင့်တွေကိုတော့ နားလည်ပေးထားပါတယ်။)
to Ko Aung:
Ofcourse, it could be. But don't forget your Maturity and Metabolism also. Neither on those you gonna be " Impotency" :-)
Waiting to read.Take your time.
ဒါပေမယ့် သေချာဖတ်ကြည့်ရင် သိပါတယ်.
ငထုံ….. ဆောရီးပါ။ ကျနော် အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲသွားလို့ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်တင်တာကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖြစ်ရလေ :-( မနောက်နဲ့ ဗျာ
ငထုံ…. ကိုအောင်ဟာ ကျနော်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကလွဲလို့ တခြားလူကို ထိခိုက်တဲ့ နောက်ပြီး ဂေး ကိစ္စအပေါ်မှာ နှိပ်ကွပ်တဲ့ ကွန်မင့်မျိုးတွေကို ဖျက်မယ်လို့ ကျနော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲ။
ငထုံ Gay အကြောင်းရေးပြီး နှိပ်ကွပ်လား ဆိုတာ ပြန်ကြည့်ပေါ့ဗျာ
ခင်ဗျား သေချာမဖတ်ဘဲ ရမ်းသမ်းဖျက်တဲ့ အချိန်မှာ တွေးနေတာကိုပြောတာ
ခင်ဗျားစိတ်ထဲ မညက်ဘူးထင်ရင် ဖျက်လို့ရတယ်
Ko Paw, pls do not delete Ko Htone’s comment. it is fine with me.
Ko Htone, I am not impotent. I still can get excited and perform my functions accordingly at the right place and the right time. :-)
Well, I know the level of excitement partially depends on age, but not entirely.
For instance, if you showabikini picture toaperson who has no prior exposure to erotic materials (e.g.aperson fromaremote village in Myanmar), I am sure his response will not be the same as mine.
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်သွားပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးစရာ ရှိပေမယ့် အချိန်မရလို့ နောက်အားတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုအလားတူ ပို့စ်တွေနဲ့ ကြုံမှပဲ ပေးတော့မယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးအတွက် ကိုပေါနဲ့ တူညီသော သဘောထား ဆန္ဒ ကျွန်မမှာ ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ ခေါင်းမြှီးခြုံ စာရီဝတ်ရတဲ့
အိုစမာဘင် ရဲ့ စတုတ္ထ မိန်းမ ဖြစ်သင့်တယ်
"မိတ်ဆွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက်ဆိုရင် သူတပါးရဲ့ ဘ၀အခြေအနေနဲ့ လူတယောက်ရဲ့ Sexual orientationကို ပြက်ရယ်မပြုသင့်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်တောင်မှ နောင်ဘ၀မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေ။"
It is text book liberals' claim. But pause and thank homosexuality hurtsanation. Whenanation is built we need men to be men, women to protect their wombs from being impregnated from foreign seeds. IfaBurmese man or woman marriesaforeigner, if offspring must become Burmanized, speak Burmese and use some Burmese sur names.
Not to turn against fags, it is ok to protect them if they pay tax and work hard, but there is no need to promote their cause. Let them keep hiding in the closet.
"စင်္ကာပူနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် လီကွမ်းယူတို့တောင်မှ ဒီ homosexuals တွေအပေါ် ထားခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ဥပဒေတွေဟာ မှားမှန်းသိလို့ ၀န်ခံပြီး တစထက်တစ တိုးချဲ့ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။"
They are just being practical, they close eyes just to invite some top foreign talent who are happen to be gays. Yes we can do so when we do need scientists
who can clone Dolly The Sheep.
Just sick of liberal craps.
ဒါနဲ့ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ ကိုပေါကို credit ပေးပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြလို့ ရမလားဗျာ။
ရမယ်ဆိုရင် lawshay@lawshay.com ကို ခွင့်ပြုကြောင်းလေး စာပို့ပေးပါနော်။
CCTV 1001 ခင်ဗျား
ကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံး မကျင့်သုံးသည်က တပိုင်း။
ကျင့်သုံးသူတို့ကို မရှုံ့ချသည်က တပိုင်းပါ။
ခင်ဗျားဥပမာကိုပဲ ကျွန်တော် ဆက်သုံးမယ်။
ကိုပေါက သူတို့လင်မယားကြားထဲ သူစိမ်း ယောကျာ်း တစ်ယောက် လာအိပ်တာကို မကြိုက်ဘူး။ ထွက်သွားလို့ မောင်းထုတ်မယ်။ တရားဥပဒေအရ မယားခိုးမှုနဲ့ စွဲမယ် စသဖြင့် လုပ်ချင်ရင် သူ့မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိရပါမယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆိုပါစို့ ... ကျွန်တော်က ကြိုက်တယ်။ ၂ ယောက် ၁ ယောက်ဆို ခပ်ဆန်းဆန်းလေးမို့ ကြိုက်တယ် welcome ပါ ဆိုပါစို့။
ဒီနေရာမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းဆိုတာက ဘာလဲ ဆိုတော့ ကိုပေါက သူမကြိုက်တာနဲ့ပဲ ဟေ့ကောင် လောရှည် ... ဖွီး ... ရွံစရာကြီး။ နွားကြီး။ အဲလိုမလုပ်ရဘူး။ ဒီကောင့်ကို မင်း မောင်းကို မောင်းထုတ်ရမယ်။ မင်းမောင်းထုတ်မလား၊ မထုတ်ဘူးလား။ မင်းမမောင်းရင် ငါမင်းတို့ ၂ ယောက်လုံးကို ဓားနဲ့ ခုတ်မယ်။ စသဖြင့် ကြိမ်းမောင်းခြင်း မပြုနိုင်ပါဘူး။ သြော် ... လောရှည်တို့ လင်မယား ကြိုက်ရှာတာပဲလေ ဆိုပြီး ဥပက္ခာ ပြုနိုင်ရမယ်။
ထို့နည်းတူ လောရှည်တို့ လင်မယားကလဲ သြော် ... ကိုပေါတို့ ဇနီးမောင်နှံကျ မကြိုက်ဘူးပေါ့လေ ဆိုပြီး လျစ်လျူရှုနိုင်ရမယ်။ အတင်းအကျပ် .. ကိုပေါကလဲ ဒါကမှ ခေတ်မီတာ။ မိုက်တယ် စမ်းဗျာ။ မစမ်းရင်တော့ ချောင်းအရိုက်ပဲ ဆိုပြီး အတင်း သွားမလုပ်တာ။